Mhando dzeWheelchair kune Vakwegura
Rudzii rwe wiricheya kune vakweguru ndinoda here?
Wchitsitsinho Kutenga Mazano YeVabereki Vakwegura
Vakwegura dzimwe nguva vanoda hunyanzvi mavhiripu kune vakweguru. Kana uri kutsvaga wiricheya kune mubereki wako akwegura, kana sekuru, iwe unoda a wiricheya izvo zvinogona kuve nyore kushandisa mumba uye mukubuda kunze kwemba. mavhiripu kune vakwegura vanogona kuita kushanyira kunze kwemusha kana rwendo rwomugwagwa rwakachengeteka uye rwakareruka.
mavhiripu kune Vakwegura
mavhiripu izvo zvakagadzirirwa vanhu vakuru zvinowanzoreruka muhuremu uye zviri nyore kushandisa. Macheya evakwegura anowanzo kupetwa, zvinoreva kuti haana kuomarara. Kana iwo achipeteka, imhaka yekuti mukuru mushandisi angangoda kureruka kwekupeta uye kuchengetedza. mavhiripu unouya nenzira dzakasiyana siyana uye maumbirwo.
wiricheya vashandisi uye rubatsiro rwevakwegura vafambi?
Chiedza chebhuku mavhiripu ndiwo marudzi akanyanya kufarirwa ezvigaro aripo nhasi. Vanogona kutenderera nehuremu kubva pamapaundi gumi nemaviri kusvika pamapaundi makumi mana nemashanu. Ultra light mavhiripu ndiyo yakapusa mhando ye mavhiripu iwe unogona kutenga. Basa rinorema kana bariatric mavhiripu ndiyo mhando inogona kuyera kusvika pamapaundi makumi mana nemashanu. Zvizhinji zveizvi mavhiripu zvakapetwa izvo zvinogona kubatsira pakufamba. tsika mavhiripu dzimwe nguva zvinodikanwa kune vashandisi vane mamwe mamiriro ehutano kana kufamba kukwana. Semuenzaniso, munhu akarwara nemoyo anogona kutadza kuzvimisikidza, murudzi urwu rwevachengeti vezviitiko vanodiwa kuti vakwanise hupenyu hwezuva nezuva. Kana iwe uchida yakagadzirirwa wiricheya, gadzirira kubhadhara mutengo unorema sezvo zvakagadzirirwa kune zvaunoda uye nemhando yemuviri, mutengo unowirirana nekudiwa kwerudzi urwu rwechigaro.
chii wiricheya ndiyo Inoenderana Kwazvo Kwandiri?
Nzira yekutora sei wiricheya YeMubereki Wekare. Vamwe vashandisi vanofanirwa kushandisa mabhatiri emagetsi macheya nekuda kwe kufamba kukwana. simba mavhiripu mabhatiri anofambiswa uye anogona kudzorwa nekushandisa kwepad pad kana joystick inowanikwa paruoko kana furemu yechigaro. Vamwe vashandisi vanosarudza kuve nemhando mbiri dzakasiyana dze mavhiripu, imwe inoshandiswa kuita zvemukati nekutenderera nemba. Rudzi urwu rwe wiricheya ingave wiricheya yemawoko kushandiswa mumba. Chimwe chacho wiricheya yaizoshandiswa panzendo dzekunze nekufamba, mushandisi angasarudza kuenda nesimba wiricheya, kana chekufambisa wiricheya yemawoko. Zvichienderana nemamiriro emushandisi, vangangodawo shawa wiricheya nekuda kwehutano.
Ini ndinodawo a wiricheya Kune Vakwegura?
Kuchengeta Vabereki Vakwegura Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve edu akasarudzika-vakuru mavhiripu.
ULTRA CHIEDZA MAWHURE
ROLLATORS & VAFAMBI
ZVIMWE & ZVINOGONESESA
Ndezvipi Shower Chairs Kune Vakwegura?
Zvigadzirwa zvekuwedzera Kufambisa Kwevakuru
Shower Chairs kune Vakwegura uye Vakaremara
Chii chinonzi Imba Wiricheya: Indoor Wiricheya
Webhusaiti Inokuudza Iwe Kuti Akawanda Sei Nguva Uchaona Vako Vako Vasati Vafa